ဆုံဆည်းရာ: ယနေ့တိုက်ပွဲများ (၁၀ ရက် နိုဝင်ဘာလ ၂၀၁၀)
ယနေ့တိုက်ပွဲများ (၁၀ ရက် နိုဝင်ဘာလ ၂၀၁၀)
ဆုံဆည်းရာ ၁၀ ရက် နိုဝင်ဘာလ ၂၀၁၀
မြန်မာစံတော်ချိန်..... ၃ နာရီ ၁၀ မိနစ်
(၃ နာရီ ၁၀ မိနစ်) ဘားအံခရိုင် ဘားအံမြို့အနီး မြင်စိုင်းတောင်ကုန်းပေါ်ရှိ နအဖ စစ်တပ်နဲ့ ဒီကေဘီအေ လက်ကျန် အဖွဲ့များ စခန်းထိုင်ရာ ငကျိဘုရားကုန်းစခန်းကို ကေအန်ယူ တပ်မဟာ (၁) မှ ယမန်နေ့ ညက တက်ရောက် သိမ်းပိုက်လိုက်ကြောင်း သိရှိရသည်။
ဒီကေဘီအေ အကုန်လုံးက နအဖ ကို ပုန်ကန်ပြီး တိုက်ပွဲ ဖြစ်တာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဗိုလ်စောလားဘွယ်ဦးဆောင်တဲ့ ဒီကေဘီအေ အဖွဲ့နဲ့ ဘုရားသုံးဆူက တပ်ဖွဲ့များသာ နအဖနဲ့ တိုက်ပွဲတွေ ဖြစ်နေတာပါ။ နအဖ စစ်တပ်နဲ့ တွဲဖက်ပြီး စခန်းထိုင်ထားတဲ့ ဒီကေဘီအေ အချို့ ကျန်ပါသေးတယ်ဟု ဒီကေဘီအေ အသိုင်းအ၀ိုင်းနှင့် နီးစပ်သူတဦးမှ ပြောဆိုသည်။
(၂ နာရီ ၂၀ မိနစ်) မြ၀တီမြို့တွင် ဖြစ်ပွားသော ဒီကေဘီအေနဲ့ နအဖ စစ်တပ် တိုက်ပွဲများကို ကေအန်ယူ များက ပြုလုပ်သည်ဟု နအဖ စစ်အစိုးရ စွပ်စွဲသည့် မြန်မာ့အသံ ရုပ်မြင်သံကြားသတင်းပါ..... မြန်မာ့အသံ လိမ်နေသည်... မြ၀တီရုပ်သံ ညာနေသည်။
(၁ နာရီ ၄၅ မိနစ်) ဗိုလ်ချစ်သူနဲ့ နအဖ တပ်တွေက နယ်ခြားစောင့် လက်ခံထားသော DKBA တပ်ကို လက်နက်များပြန်လည် သိမ်းဆည်းပြီး အရပ်ဝတ်ဖြင့်နေရန် ပြုလုပ်နေ။ မြ၀တီ တံတားထိပ်တွင် နအဖမှ CCTV ကင်မရာများ လိုက်လံထပ်ဆင်နေ။ မြ၀တီမြို့အခြေအနေမှာ တိုက်ပွဲများ ဆက်လက်ဖြစ်ပွား လာဖွယ်ရှိသည့်အတွက် ပြည်သူများ ထိုင်းနိုင်ငံဘက်ကမ်း သို့ ပြန်လည်ဝင်ရောက်မှုရှိနေကြောင်း သိရှိရသည်။
(၁၁ နာရီ ၃၂ မိနစ်) လက်ရှိ နအဖ ဘက် ၈ ရက်နေ့ တိုက်ပွဲကိစ္စတွေနဲ့ ပက်သတ်ပြီး အပြန်အလှန် သတင်းတင်ပို့တဲ့ လ၀ ကြေးနန်း စာတစောင် ထွက်ရှိလာပါတယ်။ ဟုတ်မဟုတ် မသေချာပေမယ့် စိတ်ဝင်စားစရာ ကောင်းတဲ့ စာတစောင်ဖြစ်ပါတယ်။ ကိုယ်ပိုင် သုံးသပ်ချင့်ချိန်နိုင်ပါတယ်။ လ၀ ကြေးနန်း စာတစောင်ကို ယခုလင့် နှိပ်ပါ အတိုင်း သွားရောက် ဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ်။
(၁၀ နာရီ ၃၅ မိနစ်) ထိုင်းနိုင်ငံ ဖုတ်ဖရတ်မြို့နယ်တွင် မြန်မာပြည်ဘက်ခြမ်း ကျေးရွာတွေမှာ နေထိုင်တဲ့ ရွာသူရွာသား ၅၀၀ ကျော် စစ်ပြေးဒုက္ခသည် အဖြစ် ရောက်ရှိနေပါတယ်။ မနေ့က ဝေါလေ ဒေသကို ထိုးစစ်ဆင်ခဲ့တာတွေနဲ့ ယနေ့ ဒီကေဘီအေ အခြေစိုက်ရွာတွေ နအဖ စစ်တပ်က ၂၄ နာရီအတွင်း ထိုးစစ်ဆင်မယ်ဆိုတဲ့ သတင်းကြောင့် ထိုင်းနိုင်ငံဘက်ခြမ်းကို စစ်ပြေးဒုက္ခသည်အဖြစ် ထွက်ပြေးလာခဲ့ကြတာပါ။ ထို စစ်ပြေးဒုက္ခသည် ၅၀၀ ကျော်ကို လောလောဆယ် IRC နဲ့ အခြား လူမှုရေးအဖွဲ့တွေက သွားရောက်ကူညီနေတယ်လို့ သိရပါတယ်။ လတ်တလောမှာတော့ အစားအသောက်နဲ့ ဆေးဝါးအကူအညီတွေ လိုအပ်နေပါသေးတယ်။ နောက်ထပ်ပြီးလည်း စစ်ပြေးဒုက္ခသည်တွေ ရောက်ရှိလာမယ်လို့ စစ်ပြေးဒုက္ခသည်အဖြစ် ရောက်ရှိလာတဲ့ ရွာသားတဦးကဆိုပါတယ်။
(၁၀ နာရီ ၅ မိနစ်) ဘုရားသုံးဆူဒေသမှာ ဒီကေဘီအေ အင်အား ၂၀၀ ခန့် နအဖ အခြေစိုက်စခန်း ခလရ ၂၈၃ ကို ၀ိုင်းထားကြောင်း သိရှိရသည်။ ဒီကေဘီအေနဲ့ နအဖ တပ်များ တဖက်နဲ့တဖက် ယခုအချိန်အထိ ကြို့ကြား ကြို့ကြား ပစ်ခတ်မှုများ ရှိနေပါတယ်။ ဘုရားသုံးဆူဒေသခံ ပြည်သူလူထုတွေကတော့ စစ်ပြေး ဒုက္ခသည် အဖြစ် ထိုင်းဘက်ကမ်းကိုနဲ့ ဂျပန်ရေတွင်း ဘက်ကို ၀င်ရောက်နေတယ်လို့ သိရှိရပါတယ်။ ဘုရားသုံးဆူဒေသ တဘက်ရှိ ထိုင်းဘက်ကမ်းမှာတော့ စစ်ပြေးဒုက္ခသည် ၁၀၀၀၀ (တစ်သောင်း) ကျော်သွားပြီလို့ ထိုင်း သတင်းဌာနတွေက ကြေညာထားတာတွေ့ရပါတယ်။
(၉ နာရီ ၅၁ မိနစ်) မြ၀တီမြို့မှာ ယခုပဲ လက်နက်ငယ်သံတွေ ပြန်ကြားရတယ်လို့ သတင်းပို့လာပါတယ်။
(၉ နာရီ ၃၈ မိနစ်) ထိုင်း-မြန်မာ နယ်စပ် ဒီကေဘီအေနဲ့ နအဖ စစ်တပ်များဖြစ်ပွားနေသည့် တိုက်ပွဲများ မြ၀တီကနေ ဆုတ်ခွာသွားပါတယ်။ သို့ပေမယ့် မနေ့က ညနေပိုင်းအထိ နအဖ တပ်တွေ ဒီကေဘီအေ ဗိုလ်စောလားဘွယ် နေထိုင်သည် ဝေါလေ ဒေသကို ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။ လတ်တလော သတင်းများအရ နအဖ စစ်တပ်များမှ ထိုင်းနိုင်ငံ ဖုတ်ဖရတ်မြို့နယ် တဖက်ကမ်းရှိ ဒီကေဘီအေ အခြေစိုက် သီပေါဘိုး၊ ကနဲလေး ဒေသတွေကို နအဖ စစ်တပ်က ၂၄ အတွင်း ၀င်တိုက်မယ်လို့ ဗျူဟာကနေ့ အမိန့်ချလိုက်သည်။
(၈ နာရီ ၃၈ မိနစ်) ထိုင်း စစ်တပ်မှ တပ်မမှူး သည် ဒုက္ခသည်များအား " ဗမာပြည်ဘက်တွင် တိုက်ပွဲများ ရပ်သွားပြီ။ အေးအေးဆေးဆေးဖြစ်သွားပြီ။ ကျနော်တို့လည်း သူတို့နဲ့ ညှိနှိုင်းနေပါတယ်။ အေးအေးဆေးဆေး ဖြစ်သွားတဲ့အချိန်ကျရင် တံတားကနေ ပြန်ပို့ပေးမယ်။ ကိုယ့်အိမ် ကိုယ့်ယာမှာ ကိုယ့်ပစ္စည်းတွေကို ပြန်ကြည့်လို့ရတာပေါ့။ တံတားကနေ ပြန်ပို့ဖို့ ထိုင်း မြန်မာ လူကြီးတွေနဲ့ ညှိနေပါတယ်" ဟု ပြောကြားခဲ့သည်၊
" ဒီကေဘီအေ တွေ မြ၀တီမှာ မရှိတော့ဘူး။ သူ့နေရာသူ ပြန်ဆုတ်သွားပြီ။ ' ဟု ပြောကြားခဲ့သည်၊
ထိုင်းစစ်တပ်နှင့် အာဏာပိုင်များမှ အထက်ပါအတိုင်း ပြောကြားခဲ့သော်လည်း ဒုက္ခသည်များမှာ ယနေ့ မနက်အထိ ထပ်ရောက်နေဆဲဖြစ်သည်၊ ယနေ့ ထပ်မံ ရောက်ရှိလာသော ဒုက္ခသည်များတွင် ဘုန်းကြီးများ။ ကိုရင်များ ပါလာသည်၊ ဒုက္ခသည်များမှ သူတို့အနေဖြင့် မပြန်ရဲသေးကြောင်း ထိုင်းအာဏာပိုင်တဦးမှ ပြောကြားကြသည်၊
ဒုက္ခသည်ဝင်းထဲသို့ ရောက်ရှိနေသော နယ်စပ်မှာရှိတဲ့ စက်ရုံအလုပ်သမားများကို အလုပ်ပြန်ဆင်းရန် အလုပ်ရှင်(စက်ရုံပိုင်ရှင်)များမှ ပြန်ခေါ်သွားကြောင်းသိရသည်၊ ဒုက္ခသည်များကို ထိုင်းပြည်သူများ။ မဲဆောက် ဒေသအခြေပြု အဖွဲ့အစည်းများမှ ရေများ။ ထမင်းထုပ်များ ကူညီပေးပို့ခြင်း။ ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျ ပါဝင် ကူညီ ဝေငှခြင်းများပြုလုပ်နေကြပါသည်၊
Posted by ကိုဈာန် at 10:07 AM
နေ့တိုင်းတိုက်ပွဲသတင်းတွေဖတ်လာသမျှ လ၀ကြေးနန်းလင့်ခ်ကို ဖတ်ရတော့မှ စောက်ပေါကြီးပါလားလို့ မှတ်ချက်ပေးလိုက်ပါတယ်။
နအဖစစ်တပ်မှာ အပေါ်အောက်ညွှန်ကြားတဲ့ကြေးနန်းတွေကို လွန်းထားထားဝတ္တုရေးသလို မရေးဘူးဆိုတာ ဒီဘက်က လက်နက်ကိုင်ခုခံနေတဲ့သူတိုင်းသိပါတယ်။ ဒီလို စိတ်ကူးယဉ်ရူးကြောင်ကြောင် လင့်ခ်တွေကို မတင်ပေးဖို့ တောင်းပန်ပါတယ်။
"""ဟုတ်မဟုတ် မသေချာပေမယ့် စိတ်ဝင်စားစရာ ကောင်းတဲ့ စာတစောင်ဖြစ်ပါတယ်။""" ဟုတ်မဟုတ် မသေချာတာဘဲ ဖေါ်ပြနေသေးတယ် အင်းပေါ့လေ ခင်ဗျားတို့ကိုက တင်လိုက်ရင် သတင်း မဟုတ်တဲ့ အတင်းတွေကြီးပဲကိုး..တခါတလေ ခင်ဗျားတို့တင်တဲ့ အတင်းတွေက ဟာသတွေထက် ပိုရယ်စရာကောင်းတော့..............ဟဟဟ
Animetime TV said...
Well, ဆုံဆည်းရာ, why are you posting fake links. we are looking for reliable news. you guys are fuck up with fake news and links.